Iphansi langasese: Ikamelo lokulala negumbi lokugezela - I-Airbnb
Iphansi langasese: Ikamelo lokulala negumbi lokugezela
Ikamelo e-i-townhouse ibungazwe ngu-Carl
U-Carl Ungumbungazi ovelele
Inqubomgomo yokukhansela eguquguqukayo. Ukulandela izimiso zokuhlanza zokunciphisa i-COVID19 phakathi kokuvakasha kwezivakashi. Indawo yangasese eJackson Hole. Igumbi lifaka umbhede ongangendlovukazi kanye negumbi lokugezela langasese langasese. Itholakala ngaphansi kwe-Snow King Ski Area, uhambo lwemizuzu engu-10-15 ukuya e-Town Square kanye nedrayivu esheshayo eya e-Grand Teton National Park kanye nase-Jackson Hole Mountain Resort. (Imvume # 6545)
Sitholakala e-East Jackson - khona kanye ezansi kwe-Snow King Mountain Ski Area. Uhambo lwemizuzu eyi-10 ukuya eTown Square ("idolobha" iJackson Hole). Uhambo lwemizuzu eyi-15 ukuya e-Jackson Hole Airport. Ukuhamba ngemizuzu engama-25 ukuya e-Grand Teton National Park kanye ne-Jackson Hole Mountain Resort Ski Area.
Siphinde sisondele kakhulu ezitobhini ezimbalwa zamabhasi ezingakuyisa edolobheni noma zikuyise eTeton Village.
Le yunithi isebenzisa i-100% Green Power offset ngokusebenzisa i-Lower Valley Energy.
Sinesidingo esincane sobusuku obubili kusukela ngoMeyi kuya kuSepthemba.
Igumbi lakho lokulala - elinombhede olingana nendlovukazi onethezekile - lisezingeni eliphansi ledolobha, ngakho-ke unobumfihlo. Senza uhlu lwamagumbi amabili ku-Airbnb. Igumbi elingenhla ngqo kwaleli gumbi lingase lihlalwe izivakashi ze-Airbnb.
Sikunikeza izinhlobonhlobo zetiye nekhofi ongayenza ekamelweni lakho. Kukhona ne-microwave ekamelweni kanye namatafula ambalwa asongwayo kanye nesihlalo esigoqwayo. Asihlinzeki ngokudla ngesikhathi sasekuseni.
4.96 · 515 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-515
Le yunithi iseduze nenkaba yedolobha iJackson...uma ubufuna ukuthola ubhiya endaweni yokuphuzela utshwala, ube ne-sushi e-King Sushi, uzulazule e-Town Square noma uvakashele i-Cowboy Bar edumile, konke kungaphakathi kwebanga lokuhamba ukusuka endaweni yethu. indawo.
Ngingumuntu (uma kuqhathaniswa) osemusha, ochwepheshe ohlala ematasatasa emsebenzini futhi ekhuthele ngemva komsebenzi. Ngihlala endlini yedolobha (njengendodana yami, uBode) - ngaphezu kwesitezi esikhulu, kodwa sithule. Sengibe ngiseSigodini cishe iminyaka engu-20 futhi ngingathanda ukuhlanganyela, ngikunike amathiphu okuthi ungaya kuphi noma izinto ongazibona.
Ngingumuntu (uma kuqhathaniswa) osemusha, ochwepheshe ohlala ematasatasa emsebenzini futhi ekhuthele ngemva komsebenzi. Ngihlala endlini yedolobha (njengendodana yami, uBode) - nga…
UCarl Ungumbungazi ovelele